काल्पनिक प्रेमिकाको साथमा रमाउने अपहरणकारीको कथा, युट्युबमा :: प्रभाकर गौतम :: Setopati
दास (विजय सेतुपति) आफ्नै उसुल भएको सानोतिनो अपहरणकारी हुन्। उनी बाँच्नका लागि अपहरण त गर्छन् तर हाइप्रोफाइल र अतिसम्पन्न व्यक्तिलाई छुँदैनन्। अनावश्वयक लफडा र खतराबाट बच्न उनी राजनीतिक अपहरणबाट पनि टाढै बस्छन्। अपहरण गरेर पैसा माग्ने बेला ज्यान लिने धम्की पनि दिँदैनन्।
धेरै लालच नराखी सहजै प्राप्त हुने रकम मात्र माग्छन् जसले गर्दा पैसा दिने पक्षले प्रहरी गुहार्ने कष्ट गर्दैनन्। अपराधमा संलग्न भए पनि उनी हतियार प्रयोग गर्दैनन्। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, यदि अपहरणको योजनाले काम गरेन भने प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गर्नु बुद्धिमानी हुने सोच राख्छन्।
यही नियममा चल्दै आएका दास एक्लो छन् तर एक्लै छैनन्। उनी हरहमेशा प्रेमिकासँगै भएको महसुस गर्छन् जुन वास्तविकतामा दासको भ्रम हुन्छ। तर दर्शकले पनि स्क्रिनमा विजयलाई उनकी प्रेमिकासँगै देख्छन्।
प्रेमिकासँगको काल्पनिक साथमै रमाइरहेका दास एउटा घटनापछि तीन जना बेरोजगार युवासँग ठोक्किन्छन्। ती युवालाई दासको अपहरण गर्ने शैली र सूत्र मन पर्छ। उनीहरू दाससँग मिलेर अपहरण गर्न थाल्छन्।
दासको कसैलाई हानी नोक्सानी नपुर्‍याइ रकम फिरौती माग्ने तरिकाबाट ती युवा मात्र प्रभावित हुँदैनन्। भरोसेमन्द यादव नामका एक जना यस्तो व्यक्ति पनि प्रभावित हुन्छन् जसको छोरालाई दासले अपहरण गरेर थोरै पैसामै सकुशल फिर्ता गरिदिएका थिए।
भरोसेमन्दले दाससँग मन्त्री सदानन्द भोसलेको छोरा अरुमाइलाई अपहरण गरिदिन आग्रह गर्छन् र यसका लागि आफूले दुई करोड दिने प्रस्ताव राख्छन्। तर दासका लागि भने यो शक्तिशाली मान्छेबाट टाढै रहने उनको सिद्धान्त विपरीत कुरा हुन्छ।
जसोतसो भरोसेमन्दले दासलाई मनाउन सफल हुन्छन्।
अरुमाइ धनी नेताका बिग्रेका छोरा हुन्छन् जो बुबाले व्यवसाय गर्ने पैसा नदिएको झोंकमा आफ्नै नक्कली अपहरण गरेर बुबासँग पैसा असुल्ने योजना बनाइरहेका हुन्छन्। जब दास समूह मन्त्री सदानन्दको घरनजिकै पुग्छन् उनीहरूले अमुराइलाई अरू कसैले अपहरण गरेर लगेकाे देख्छन्।
नक्कली अपहरणको योजना बनाएका अमुराइ र सक्कली अपहरणकार दास समूहको भेटपछि फिल्म थप रमाइलो बन्छ।
मन्त्रीको छोराको अपहरण भएको खबरले ठूलो हल्लीखल्ली मच्चिन्छ। अपहरणकारी पत्ता लगाउन सुरक्षा निकाय कडा पारेपछि दास समूहले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्छ। अपहरण र फिरौतीको चक्करमा घुम्ने यो रमाइलो फिल्म हो।
क्राइम ड्रामाको यस फिल्ममा पात्र र घटना धेरै छन्। तर हरेक पात्र र दृश्यलाई चलाखीपूर्वक राखिएको छ। घटनाको सिलसिला चुँडिदैन।
फिल्मको मध्यतिर इनकाउन्टरका उस्ताद प्रहरी ब्रह्यमाको आगमनपछि फिल्म थप रोचक बन्छ।
मन्त्रीको छोराको आफैंले आफैंलाई अपहरण गर्ने योजना कहाँ पुगेर टुंगिन्छ? त्यस घटनाले दास र उनका साथीहरूले देखेको दुई करोड कमाउने सपनालाई कसरी र कस्तो प्रभाव पार्छ?
घटनाक्रम, परिस्थिति र संवाद आदिको संयोजनले दर्शकलाई हँसाइरहन्छ। हरेक दृश्यपछि अब यस्तो होला भन्ने दर्शकको अनुमानलाई मात खुवाउने गरी कथाले रोचक मोड लिँदै जान्छ।
नलन कुमारासमीको लेखन तथा निर्देशनको फिल्म 'सुध्धु कव्वुभ' यस्तै रोचक प्रश्न बोकेर हेर्दाहेर्दै थाहै नपाइ सकिने फिल्म हो।
पछिल्ला एक दशकका सर्वाधिक सफल तमिल अभिनेता कमजोरीसहितको सामान्य अपराधीको भूमिकामा सुहाएका छन्। उनकी प्रेमिकाको भूमिकामा संचिता सेट्टीले पनि प्रभाव छोडेकी छन्।
दासको समूहमा जोडिने तीन युवाको भूमिकामा बबी सिंह, अशोक सेलवन, रमेश तिलकको भूमिका रमाइलो छ। तर यी फिल्ममा प्रहरी अफिसर ब्रह्यमाको भूमिकामा योग जपीले विशेष छाप छोड्छन्।
डार्क कमेडीका माध्यमबाट अपराधका विभिन्न आयामलाई उजागर गर्ने सन् २०१३ को यो फिल्मले व्यवसायिक रूपमा राम्रो कमाइ गरेको थियो। साथै, यो फिल्म समीक्षकहरूबाट पनि उत्तिकै सराहना पाउन सफल भयो।
(फिल्म हेर्न तल Watch on YouTube मा क्लिक गर्नुहोस्)
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक ५, २०७८, २१:३८:००